Fivavahana · Oktobra, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Fivavahana · Oktobra, 2015
Tantara mikasika ny Fivavahana tamin'ny Oktobra, 2015
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana30 Oktobra 2015
Shiita an-tapitrisany no manamarika ny tsingerintaonan'ny mahamaritiora ny Imam Hussain bin Ali, izay maty novonoina tokony ho 1.300 taona lasa izay, isan-taona. Mandaka ny fomba fandraisana diso ataon'ny fampitam-baovao lehibe ny mpiserasera.
Azia Atsimo24 Oktobra 2015
Nandray fepetra haingana ny Fitsarana Tampony ao Maldives mba hitsipaka ny didim-pitsarana hamono ho faty vehivavy iray noho ny fijangajangana.
Namono Olona Dimy Tao Amin'ny Moske Shiita Ao Arabia Saodita Ny Lehilahy Mitam-piadian'ny ISIS
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana21 Oktobra 2015
Nanafika moske tao Saihat, ao amin'ny faritany atsinanan'i Arabia Saodita tamin'ny alin'ny Zoma 16 Oktobra ny lehilahy mitam-piadiana ISIS, nahafaty olona dimy sy nandratra olona sivy izy alohan'ny nahafatesany voatifitry ny polisy.
“Mandrahona” Hivadika Silamo Ny Tanàna Kely Ortodoksa Serba Ahafahana Manavao Ny Fiangonana Ao An-toerana
Eoropa Afovoany & Atsinanana14 Oktobra 2015
Nandrahona "hivadika Silamo daholo" ny mponina ao Šopić, tanàna kely ao ivelan'i Belgrade ihany raha tsy avaozin'ny paroasy amin'ny Oktobra 2015 ny fiangonana Ortodoksa ravan'izy ireo.
Hampiaka-danja ny vola zambiana ve ny vavaka? Mino izany ny Filoha Lungu
Afrika Mainty12 Oktobra 2015
"Midika tsy fahaizanao toekarena ny mivavaka hahazoan'ny vola lanja. Tsy asan-devoly ny fihenan-danjan'ny vola kwacha."
Lehilahy Haindò Maty Novonoina Fa Nihinana Henan'omby
Azia Atsimo06 Oktobra 2015
"Manankarena amin'ny fanondranana hena ny sasany, ny sasany kosa maty noho ny fihinanana azy? Ny fandrarana sy ny nasionalisma tafahoatra no mahatonga izany."
Amerika Latina01 Oktobra 2015